वातावरणिय वाल पत्रकारिता, शिक्षा र सौर्य उर्जाका लागि कार्यक्षेत्र बाहिर :: NepalPlus
हिजो साँझ म लिल शहर आएँ । पेरिसबाट केहि सय टाढा पर्छ यो । पुरानो शान्त शहर । आप्रवाशीपनि कम । शान्त स्वभावका दयालू मान्छे बस्ने भनेर चिनिने रहेछ । साँझ म साथीहरुकोमा बसें । यहाँ आउनुको कारण मेरो अफ्नो गाउँको स्कूल जहाँ अन्धाहरुकोलागि पनि स्कूल छ, सामूदायीक भवन र सामूदायिक पुस्तकालय छ । हो त्यसमा सौर्य उर्जाबाट बुजिली बाल्नकालागि हो । त्यसको लागि के कस्तो तयारी गर्ने भनेर हिजो सांझ तयारी बैठक बसियो । त्यसकालागि इनर्जी सोलर भन्ने कम्पनीमा कार्यरत इन्जिनियर साथीलाई जिम्मा दिइयो । आज मैले त्यो सोलर राखेपछि स्थानिय मानिस र अन्धाले के कस्ता फाइदा लिनसक्छन् भनेर ब्याख्या गर्नु छ ।
आजै साँझ अर्को बैठक छ । वातावरणिय क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३ दर्जन मान्छे आउँदै छन् । तिनिहरुसित के कस्ता एजेन्डा लैजाने, बैठकमा कसरि प्रस्तुत हुने भनेर आज दिउंसो २ बजे देखि बैठक बस्दै छौं । मैले ६ पेजको वातावरणि लेखन, ज्ञान, तालिम, पुस्तकालय निर्माण लगायत विषयमा कार्ययोजना प्रस्ताब पेश गर्दै छु । बाजुराको एउटा स्कूललाई केहि सहयोग गर्ने कुरो निश्चित झैं छ । मैले ‘त्यो नेपाल’ पुस्तकको दोस्रो भाग पनि लेख्ने निधो गरेको छु । त्यसकालागि पात्रहरु कसरि खोज्ने ? कस्ता खोज्ने ? साथीहरुको सहयोग लिँदै छु । यतातिर नेपालप्रेमी र नेपालकालागि केहि विशेष काम गरेका फ्रान्सेलीको खोजि गर्दै छौं अन्तर्वार्ता गर्नकालागि । त्यसैले यतिखेर म ब्यस्त छु आफ्नै काममा ।
साथीहरुको गुनासो छ, यस अघि गरेका कामको गतिलो अनुगमन भएन । अनि तिमीले झै लगनशिल भएर प्रस्ट संग काम गर्ने, पारदर्शी हुने मान्छे पाइएन । मैले आफ्नो स्कूलको लागि गरिने सोलारको लागि अनुगमनको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु भनेको छु । त्यसैगरि बाजुराको स्कूलको लागि गरिने सहयोगकालागि पत्रकार, भिडियो निर्माता र लेखक दाइ मोहन मैनालीको सहयोगमा बजुराकै स्थानिय एक एनजियोको सहयोग लिन सकिएला भन्ने सुझाव दिएको छु ।
आज मध्यन्ह लियों शहर पुग्ने छु । त्यहाँपनि नेपालकै लागि माहुरी पालनबारे सानो बैठकमा सहभागि हुन साथीहरुले आग्रह गरेका छन् । नोभेम्बरमा एउटा ठूलो कार्यक्रम गरेर नेपालबारे जानकारी दिने सल्लाह हुँदै छ । त्यसको अन्तिम निर्णयपनि गरिने छ । महत्वपूर्ण केहि उपलब्धि भए, नयां नौला कुरा भए र नेटमा बस्न पाएमा नेपालप्लस अपडेट गर्दै रहनेछु । नत्र शुक्रबार साँझा भेट होला । तपाइहरुको सहयोग, साथ र प्रतिक्रियाका लागि सदा अनुग्रही छु ।